ကိုမိုရိုနိုင်ငံ - ဝီကီပီးဒီးယား
ကိုဩဒိနိတ်: 12°10′S 44°15′E﻿ / ﻿12.167°S 44.250°E﻿ / -12.167; 44.250
အိန္ဒိယ သမုဒ္ဒရာအတွင်း မိုဇမ်ဗစ် ရေလက်ကြားမက်ဒါဂက်စကာကျွန်း၏ အနောက်မြောက်ဘက်နှင့် အာဖရိကအရှေ့တောင်ဘက် ကမ်းခြေအနီးရှိ ကိုမိုရိုကျွန်းစု သမ္မတ နိုင်ငံတွင် ၁၉၇၇ခုနှစ် ခန့်မှန်းခြေအရ လူဦးရေ ၃၇ဝ,ဝဝဝ ရှိသည်။ ကိုမိုရိုကျွန်းစုနိုင်ငံ၏ အကျယ်အဝန်းမှာ ၈၆၃ စတုရန်းမိုင်ရှိသည်။ မြို့တော်မှာ ဂရင်းကိုမိုရို ကျွန်းပေါ်ရှိ မိုရိုနီမြို့ဖြစ်သည်။
Umoja wa Komori (Ngazidja Comorian)
Union des Comores (ပြင်သစ်)
الاتحاد القمري (အာရပ်)
"Unité – Solidarité – Développement" (ပြင်သစ်)
وحدة، تضامن، تنمية (အာရပ်)
နိုင်ငံတော် သီချင်း: Udzima wa ya Masiwa (Comorian)
(အင်္ဂလိပ်: "The Unity of the Great Islands")
ကိုမိုရိုနိုင်ငံ၏ တည်နေရာ (စက်ဝိုင်းဝိုင်းထား)
ဖက်ဒရယ် သမ္မတ သမ္မတနိုင်ငံစနစ်
• ပေါ်တူဂီစူးစမ်းရှာဖွေသူတို့မှ တွေ့ရှိခြင်း
• ပြင်သစ်အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှ Ngazidja၊ Ndzuwani၊ Mwali
• ကိုမိုရို အစောင့်ရှောက်ခံနိုင်ငံ
၁၈၈၇ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ ၆ ရက်
• မာဒါဂတ်စကာနှင့် အမှီအခို ကိုလိုနီဒေသများမှ အမှီအခိုဒေသ
၁၉၀၈ ခုနှစ် ဧပြီ ၉ ရက်
• ပြင်သစ် ပင်လယ်ရပ်ခြားဒေသများ
၁၉၄၆ ခုနှစ် အောက်တိုဘာ ၂၇ ရက်
• ကိုမိုရို နိုင်ငံ
၁၉၆၁ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၂၂ ရက်
• ပြင်သစ်ထံမှ လွတ်လပ်ရေးရ
၁၉၇၅ ခုနှစ် ဇူလိုင် ၆ ရက်
• ကိုမိုရို ဖက်ဒရယ် အစ္စလာမ် သမ္မတနိုင်ငံ
၁၉၇၈ ခုနှစ် အောက်တိုဘာ ၁ ရက်
• ကိုမိုရို ပြည်ထောင်စု
၂၀၀၁ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၂၃ ရက်
၂၀၀၉ ခုနှစ် မေလ ၁၇ ရက်
၁,၈၆၁ km2 (၇၁၉ sq mi) (အဆင့်: ၁၇၁a)
• ၂၀၁၉ ခန့်မှန်း
၈၅၀,၈၈၆ (အဆင့် - ၁၆၀)
၄၅၇/km2 (၁,၁၈၃.၆/sq mi) (အဆင့် - ၂၇)
$၂.၄၄၆ ဘီလီယံ (အဆင့် - ၁၇၈)
$၂,၇၉၉ (အဆင့် - ၁၇၇)
$၁.၁၇၉ ဘီလီယံ (အဆင့် - ၁၈၂)
$၁,၃၄၉ (အဆင့် - ၁၆၅)
အလယ် · ၁၄၁
အလယ် · ၁၅၆
ကိုမိုရို ဖရန့် (KMF)
Excluding Mayotte, an overseas department of France.
ကိုမိုရိုကျွန်းစု သမ္မတနိုင်ငံတွင် ၁၉၇၈-ခုနှစ် မေလ ၁၃ ရက်နေ့တွင် နိုင်ငံရေး၊ စစ်ရေး ညွှန်ကြားမှု အဖွဲ့က သမ္မတ အလီဆွိုင်းလီယာအား ဖြုတ်ချ၍ အာဏာသိမ်းခဲ့ပြီး လွတ်လပ်စွာ ကိုးကွယ်ခွင့်၊ ပုဂ္ဂလိကပိုင်ပစ္စည်းများ လွတ်လပ်စွာ သုံးစွဲခွင့်များ ပါဝင်သော ယခင်အစိုးရလက်ထက်က ဆုံးရှုံးခဲ့သည့်အခွင့်အရေးများကို ပြန်လည်ရရှိအောင် ဆောင်ရွက်ပေးမည်ဟု အစိုးရသစ်အဖွဲ့ကထုတ်ပြန် ကြေညာခဲ့လေသည်။
၁၉၇၈ ခုနှစ် မေလ ၁၇ ရက်နေ့တွင် ဝန်ကြီးချုပ်နှင့် နိုင်ငံတော် အကြီးအကဲဖြစ်သူ အဗ္ဗဒူလာဟီမိုဟာ မက်လက်သို့ စစ်ညွှန်ကြားရေးအဖွဲ့က အာဏာလွှဲအပ်ပေးခဲ့သည်။ ကိုမိုရိုကျွန်းစုတွင်လစ်ဗရယ် ဆိုရှယ်လစ်ဝါဒကို ကျင့်သုံးမည်။ ဒီမိုကရေစီအဆောက်အအုံများ ပြန်လည်ထူထောင်ကာ ပြည်သူ့ဝန်ထမ်း လုပ်ငန်းများပြန်လည် ဆောင်ရွက်ပေးမည်ဟု အစိုးရ သစ်ကကြေညာချက်တစ်ရပ် ထုတ်ပြန်လိုက်အပြီးတွင် ကျွန်းစုတွင်ပါဝင်သော မိုဟီလီကျွန်းနှင့် အန်ဂျူအန်ကျွန်းတို့သည် အစိုးရသစ်နှင့် ပူးပေါင်းလိုက်ကြသည်။ ရာထူးမှ ဖြုတ်ချခြင်းခံရသော ကိုမိုရိုကျွန်းစု သမ္မတနိုင်ငံအကြီးအကဲ အလီဆွိုင်းလီယာသည် ထိန်းသိမ်းထားရာမှထွက်ပြေးရန် ကြံစည်မှုဖြင့် ပစ်သတ်ခံလိုက်ရလေသည်။
ပြင်သစ်နိုင်ငံနှင့် ကိုမိုရိုကျွန်းစုနိုင်ငံတို့သည် သံအမတ်ကြီးအဆင့်ဖြင့် သံတမန်ဆက်ဆံမှု ပြန်လည်ထူ ထောင်ကြမည်ဟုဆုံးဖြတ်လိုက်ကြသည်။ နှစ်နိုင်ငံ သံတမန်ဆက်ဆံရေးနှင့် ပတ်သက်၍ ကိုမိုရိုနိုင်ငံလက်ရှိ အာဏာရ နိုင်ငံရေး စစ်ဖက်ဆိုင်ရာညွှန်ကြားရေးအဖွဲ့ ပူးတွဲသဘာပတိများဖြစ်ကြသော အာမက်အဗ္ဗ ဒူလာနှင့် မိုဟာမက် အာမက်တို့သည် ပြင်သစ်နိုင်ငံသို့ ၁၉၇၈ခုနှစ် ဇွန်လ ၁ဝ ရက်နေ့က သွားရောက်ခဲ့ကြသည်။
ကွယ်လွန်သူသမ္မတ အလီဆွိုင်းလီက ၎င်းအား ရာထူးမှဖယ်ရှားအာဏာမယူမီ ၁၉၇၅ ခုနှစ်အတွင်းက အာမက် အဗ္ဗဒူလာက ကိုမိုရိုကျွန်းစုနိုင်ငံအား တစ်ဖက်သတ် လွတ်လပ်ရေးကြေညာပြီးနောက် ပြင်သစ်နှင့် ကိုမိုနိုင်ငံတို့မှာ သံတမန် အဆက်အသွယ် ဖြတ်တောက်ခဲ့ရလေသည်။ 
↑ Comoros Constitution of October 1, 1978။ Digithèque MJP (2012)။ (in ပြင်သစ်)
↑ ၂.၀ ၂.၁ ၂.၂ ၂.၃ Comoros။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ငွေကြေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့။
↑ GINI index။ ကမ္ဘာ့ဘဏ်။
↑ Human Development Report 2020 The Next Frontier: Human Development and the Anthropocene (PDF)။ ကုလသမဂ္ဂ ဖွံ့ဖြိုးမှု အစီအစဉ်။ 15 December 2020။ pp. 343–346။ ISBN 978-92-1-126442-5။ 16 December 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ကိုမိုရိုနိုင်ငံ&oldid=699562" မှ ရယူရန်
၄ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၄:၅၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၄ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၄:၅၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။